एप्पलले यस बर्षको अन्त्य हुनु अघि आईट्यून्स एलपी हटाउनेछ | ग्याजेट समाचार
एप्पल आईट्यून्स एलपी प्रारूप २०१ 2019 सम्ममा अन्त्य गर्न चाहन्छ
ईडर एस्टेबान | | एप्पल, सामान्य, हाम्रो बारेमा
आइट्यून्स एलपी ढाँचा यस्तो चीज हो जुन निश्चित रूपले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन। यो थप अन्तरक्रियात्मक सामग्रीको साथ आईट्यून्समा डिजिटल एल्बमहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०० in मा फिर्ता जन्मिएको थियो। यो संग एप्पलका प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटली रूपमा डिस्क किन्नको लागि अधिक प्रोत्साहन प्राप्त गरेको चाहन्थे र पसलमा जानु हुँदैन। तर, यस्तो देखिन्छ कि यस ढाँचामा यसको दिनहरू नम्बर गरिएको छ।
यसको सुरूवात भएको लगभग नौ बर्ष पछि, कपर्टिनो कम्पनीले पहिले नै यो ढाँचा समाप्त गर्ने सोच्दै छ। वास्तवमा, तिनीहरू पनि यो वर्षको लागि प्रतीक्षा गर्न चाहँदैनन् यो एक वास्तविकता बन्नको लागि। हामी के हौं भनेर ITunes LP ढाँचाको अन्तिम दिन भन्दा पहिले.
यो भन्नु पर्दछ कि यो लगभग years बर्षमा कुनै पनि सफल भएको छैन। यस सबै समयमा देखि केवल albums०० एल्बमहरू यो ढाँचा को उपयोग गरीएको छ। त्यसैले यो कुनै पनि समयमा कलाकार र रेकर्ड कम्पनीहरू बीचमा प्रवेश गरिएको छैन। थप, यी दिनहरू, स्ट्रिमि ofको बृद्धिले पनि कम अर्थ बनाउँदछ।
थप रूपमा, त्यहाँ केहि अन्य कारणहरू छन् जसले त्यति धेरै योगदान गरेनन्। देखि, यो एकदम अनौंठो लागे पनि, आईट्यून्स एलपी कहिले पनि आईओएस उपकरणहरूको लागि अनुकूलित गरिएको छैन। कम्पनी को पक्ष मा केहि अजीब निर्णय। यी उपकरणहरूका प्रकारहरू तीनै हुन् जुन हालै सफल छन्। तर त्यो पनि यसले सहयोग पुर्‍याएको छ कि यसले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको छैन.
यद्यपि कम्पनीले यसको केहि विशेषताहरू लिएको छ र एप्पल संगीत मा तिनीहरूलाई लागू गरेको छ। उदाहरण को लागी हामी संग कार्य छ प्रत्येक गीतको लिरिक्स पढ्दै। कमसेकम तिनीहरू यस परियोजनाबाट केहि सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन्।
एप्पलले अप्रिल १ को रूपमा आइट्यून्स एलपी ढाँचामा सामग्री समर्थन गर्न रोक्नेछ। बर्षको बाँकी अवधिमा, कम्पनीले यसलाई एल्बमबाट निष्क्रिय बनाउँदछ जुन यसको प्रयोग गर्दछ। त्यसो भए यस प्रक्रियाले केहि समय लिन सक्दछ। ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि जो अझै यो ढाँचामा सदस्यता लिइएका छन्, आईट्यून्स म्याच मार्फत डाउनलोड गर्न सकिन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » एप्पल आईट्यून्स एलपी प्रारूप २०१ 2019 सम्ममा अन्त्य गर्न चाहन्छ
ट्विटरबाट GIFs र भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने